Emergency chenjedzo. Yemahara software yekugadzirisa iwo | Linux Vakapindwa muropa
Kana pakaitika dambudziko zvakafanira kupa vanhu vakakanganiswa, uye kune vavanofanira kupindura, chiziviso chinovatendera kuti vagadzirire. Mukati Me chinyorwa chapfuura Ini ndakatsanangura hunhu hwerudzi rwakasarudzika rweyakavhurika sosi software. Mamaneja ekuzivisa. Ino yaive nguva yekudzokorora zvimwe zvekushandisa zviripo.
1 Emergency chenjedzo. Nei uchishandisa chaiyo software
2 Vhura sosi maturusi ezveruzivo zvechimbichimbi
2.1 sahara eden
2.2 Vhura Nhepfenyuro EAS
2.3 DisInvent Sendai
Emergency chenjedzo. Nei uchishandisa chaiyo software
Ini ndanga ndataura mune yangu yapfuura chinyorwa kuti zvaive zvisati zvamboitika kwandiri kuti zvirongwa zverudzi urwu zvinogona kushandiswa nemakambani akazvimirira. Nekudaro, kana tikadzidza chero chinhu kubva kudenda iri, ndizvozvo ese epakati kana makuru masangano anofanirwa kuzviita.
Zvakanakira maneja akanaka akangwarira ndeaya:
Yakasarudzika interface kutumira meseji nenzira dzakawanda.
Minimization mukana wekuparadzira ruzivo rwenhema kana rwakamonyaniswa.
Kusvika kuvanhu vazhinji panguva imwe chete.
Ipa imwe kurumidza kupindura kune zviitiko zvisingatarisirwi.
Gadzira imwe kunzwa kwekuchengeteka uye kuchengetedzwa kwevanhu.
Vhura sosi maturusi ezveruzivo zvechimbichimbi
Iyi chikuva yakanyanya kudarika hurongwa hwekurumidzira. Iyo modular dhizaini inobvumidza, mukuwedzera kune kuumbwa kweyevero, manejimendi ekupindura uye ekudzosa zviito.
Zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitwa neSahara EDEN
Kugadzirwa kwe database yemasangano akagadzirira kupindura kune yega emergency.
Manejimendi yehunyanzvi vashandi uye vanozvipira.
Registry yematumba uye zvekushandisa zviripo uye zvinodikanwa kune akasiyana njodzi.
Kutumira yambiro kune avo vanobatwa vachishandisa email, SMS uye Twitter.
Kufungidzira pane mepu yenzvimbo dzakakodzera.
Vhura Nhepfenyuro EAS
En nyaya iyi tine mumwe mhinduro yakanangana nenhau. Neichi chishandiso iwe Ivo vanogona kutepfenyura mameseji ekukurumidzira pawairesi, terevhizheni, tambo terevhizheni chiteshi, uye satellite terevhizheni. Mitauro yemitauro yakawanda inogona zvakare kugadzirwa nekutsikisa kana kutsvedza kwemabhodhi emasaini e LED.
Iyo yekuvandudza inopa EAS sechikamu chemhinduro yavo yekushambadzira kana seyakazvimiririra chishandiso chinobatana nechero ipi yekushambadzira software. Mune ino yekupedzisira kesi, inogona kutengwa neyakaomarara kana kuunganidza yako.
Chimwe chiitiko ndechekuti chikuva chakagadzirirwa kutevedzera zviyero zvepasi rose zvekufambisa kweyevero munhau.
Pano Tiri kutaura de software yekuzivisa nezvekukurumidzira Iyo yakavhurwa sosi uye zvakare yemahara yekutengesa uye isiri-yekutengesa mashandisiro. UyeYakagadzirirwa kudzikisa njodzi dzenjodzi uye kurasikirwa kwakabatana.
Yakafanogadzirirwa dhatabhesi nemhando huru dzenjodzi uye mhedzisiro yavo.
Chinogadziriswa chishandiso chekuunganidza dhata pane njodzi nyowani.
Interface yekushandisa maviri mazinga ejogographic ruzivo manejimendi; yemuno uye Webhu Mepu Services.
Kubatanidzwa uye kuchinjana neGoogle Mepu neGoogle Earth.
Kunze uye kutumira kunze kwedatha mune XML mafomati uye maspredishiti.
Tsigiro yeinjini dhatabhesi senge Postgres, MS SQL Server, Oracle, MySQL, nevamwe.
Cyphon yakanakira mhinduro yezviitiko uye manejimendi. Nechirongwa ichi zviitiko zvinogona kutambirwa, kugadziriswa, uye kuiswa pamberi, zvichiita kuti zvive nyore kune vaongorori kuti vaongorore uye vanyore zviitiko. Kana yambiro ikakonzerwa, vaongorori vanogona kuona mhando yechiitiko chakaitika, nzvimbo yacho, uye padanho rekushomeka. Nekudzvanya kamwe chete, vanogona kuwana marekodhi ane chekuita nechiitiko ichi, vachivabatsira kudzora nguva inotora kuongorora chiitiko uye kuzviita.
Zvinoita kuti zvive nyore kuunganidza dhata kubva kwakasiyana senge maemail, APIs, mameseji erogi, mapuratifomu enhau, nevamwe
Ratidza ruzivo rwepakati mune rimwe dhibhodhi.
Iyo inobvumidza iyo chizvarwa chemasayendisiti machenjedzo uchishandisa pop-up Notices.
Shandisa iro rondedzero yezviitiko zvinoenderana nekuoma kwavo.
Iyo inogonesa kuongororwa kwebasa rakaitwa kupindura kune yega yambiro.
Kana chimwe chinhu chiri pachena kana munhu achipinda zvakadzama munyika yemahara uye yakavhurwa sosi software, ndeyekuti inowanzo shandiswa software inogona kunge isina kugadzirirwa kuenda padanho rakaenzana neyeyeimba. Asi, ukuru hwayo mune maturusi ekushandisa chaiko hapana mubvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Emergency chenjedzo. Yemahara uye yakavhurwa sosi software kuti uitonge
Mhoroi, ungadai uchiziva chero chirongwa chekupa makirasi mune coloaborative intranet, ine chat uye gadziriso yekunyora? semuenzaniso, maspredishiti, kana zvichibvira pasina zvinoenderana neinternet
Rega nditsvage zvishoma. Mukufamba kwemaawa makumi maviri nemana anotevera ndinoiisa
Purism inozivisa zvidzikiso pamalaptop ayo eLibrem